AMISOM oo Sheegtay Inay Tahay Awooda Kaliya Ee Somaliya Kajirta | Wardoon Wardoon.net - Somali News
AMISOM oo Sheegtay Inay Tahay Awooda Kaliya Ee Somaliya Kajirta
Amisom ayaa waxa ay ku goodisay cid waliba oo ka hortimaada awaamiirta Amisom ay u arkaan inay yihiin cadoowga koowaad ee ay leeyihiin ciidamada Midowga Afrika ee dalka Soomaaliya.
Taliyaha Ciidamada Amisom ee Gobalka Banaadir iyo Shabeelooyinka Gen. Dick Olum ayaa Warbaahinta ugu sheegay Magaalada Muqdisho in ciidamada Midowga Afrika ee Amisom ay yihiin awooda koowaad ee dalka Soomaaliya, sidaasi awgeedna cidii ka hortimaada awaamiirta Amisom inay yihiin cadoowga ay leeyihiin.
Wuxuu sheegay in dalka Soomaaliya ay u joogaan fulinta awaamiirta Dowladda Federaalka Soomaaliya, howlgalka hub ka dhigista ee Magaalada Muqdisho ka socdana uu yahay mid socon doono ilaa ammaanka Magaalada Muqdisho laga xasiliyo.
Doorka Amisom ayuu ku tilmaamay inay tahay nabadeynta dalka Soomaaliya, qorshaha hub ka dhigistana ay wadato Dowladda Federaalka Soomaaliya ilaa ujeedka Dowladda ay ka leedahay arintana aan la joojin doonin.
Gen. Dick Olum ayaa sheegay in awooda koowaad ee dalka ay yihiin ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan, sidoo kalena ay ku xigaan ciidamada Milateriga, Nabadsugida iyo ciidamada Booliiska Soomaaliyeed.
Amisom ayaa sidoo kale ku goodisay inay tallaabo adag ka qaadi doonaan cid waliba oo kasoo horjeesata xasilinta ammaanka Magaalada Muqdisho iyo dadaalada nabadeed ee Dowladda Soomaaliya Muqdisho ay ka wado.
Hadalkaan goodiska ah ee kasoo baxay ciidamada Midowga Afrika ee Amisom ayaa imaanaya, xilli Muqdisho ay ka socoto howlgalka hub ka dhigista Dowladda Federaalka Soomaaliya ay wado.